अफ्रिन बनाम फ्लोनास: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल समुदाय कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार प्रेस औषधि जानकारी, समाचार मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य खेलहरु कम्पनी, समाचार चेकआउट
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> अफ्रिन बनाम फ्लोनास: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
नाकको भीड तब ​​हुन्छ जब रगत वाहिनाहरू र नाक धाराको वरपरका ऊतकहरू अधिक तरल पदार्थको कारण अभिभूत हुन्छन्। यसले नाकमा भरिपूर्ण वा जोडिएको भावना सिर्जना गर्दछ, जसले सास फेर्न गाह्रो बनाउन सक्छ। नाकको भीडसँग बग्ने नाक, छींकने, खोकी वा टाउको दुखाइको साथ हुन सक्छ।
अफ्रिन (अक्सिमेटाजोलिन) र फ्लोनासे (फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट) प्रत्येक नाक स्प्रे हुन् जसले नाकको भीडसँग सम्बन्धित लक्षणहरूको राहत प्रदान गर्दछ। यद्यपि ती दुबै नाकको स्प्रेहरू हुन्, यस्तै संयन्त्र जसले उनीहरूलाई भीडबाट छुटकारा दिन्छ।
अफ्रिन र फ्लोनेज बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
अफ्रिनमा सक्रिय संघटक, ऑक्सीमेटोजोलिन, अल्फा-एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हो। जब नाकका परिच्छेदहरूमा शीर्ष रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यो एक वासोकनस्ट्रक्टर हो। यसको परिणामस्वरूप नाका दर्रेको टिशू र रक्त वाहिकाहरूमा तरल पदार्थ प्रवाह र साथै एयरवे खोल्ने परिणाम हुन्छ।
अफ्रिन १० मिनेट जति कममा प्रभावकारी छ, र यसको प्रभाव १२ घण्टा सम्म रहन सक्छ। यद्यपि यो धेरै नै प्रभावकारी डिकन्जेन्टेन्ट हो, त्यहाँ प्रमाणहरू छन् कि यसले तीन दिन भन्दा बढि प्रयोग गर्दा रिवाउन्ड भीडको कारण हुन सक्छ। त्यसकारण, दीर्घकालीन प्रयोगको सिफारिश गरिदैन। अफ्रिन ०.55% अक्सीमेटाजोलिन युक्त विभिन्न प्रकारका नाक स्प्रे समाधानहरूमा उपलब्ध छन्। त्यहाँ १ m मिलि र m० मिलि प्याकेज आकारहरू उपलब्ध छन्। अफ्रिन प्रिस्क्रिप्शन बिना ओभर-द-काउन्टर (OTC) उपलब्ध छ। अफ्रिन6बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूका साथै वयस्कहरूको लागि स indicated्केत गरिएको छैन।
फ्लोनेज, फ्लुटिकासोन प्रोपियोनेट, कोर्टिकोस्टेरोइड हो। जब कोर्टीकोस्टेरोइड नासिका परिच्छेदहरूमा शीर्ष रूपमा लागू हुन्छन्, तिनीहरू एन्टिप्रुरिटिक, एन्टी-इन्फ्लेमेटरी, र वासोकनस्ट्रिक गुणहरू प्रदर्शन गर्दछन्। कोर्टिकोस्टेरोइड्सले पेप्टाइड्सलाई लिपोकोर्टिनको रूपमा चिनिन्छ, जसले त्यसपछि दाह्रा मध्यस्थको गठन र जारी कम गर्दछ। फ्लोनेजको प्रभाव निरन्तर प्रयोग पछि ओभरटाइम निर्माण गर्दछ, र यसैले यसले फ्लोनासको पूर्ण लाभ बुझ्न केही दिन वा हप्ता लिन सक्दछ। Flonase एक पर्चेको रूप मा उपलब्ध छ र over-the-काउन्टर। प्रिस्क्रिप्शनको रूपमा, यो नाक स्प्रे बोतल हो जसमा १२० स्प्रे हुन्छ। ओभर-द-काउन्टर संस्करण spray० स्प्रे वा १२० स्प्रे बोतलहरूको रूपमा उपलब्ध छ। Flonase4बर्ष वा माथिका बच्चाहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, साथ साथै वयस्कहरूको रूपमा।
अफ्रिन र फ्लोनेस बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Alpha-adrenergic एगोनिस्ट कोर्टिकोस्टेरोइड
जेनेरिक नाम के हो? Oxymetazoline Fluticasone propionate
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? नाक स्प्रे नाक स्प्रे
मानक खुराक के हो? प्रत्येक १२ घण्टामा दुई वा तीन स्प्रेहरू प्रत्येक नाकपुडमा दैनिक एक देखि दुई स्प्रे
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? To देखि days दिन धेरै दिन महिना
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू, years बर्ष वा माथिका बच्चाहरू वयस्कहरू, Children बर्ष वा माथिका बच्चाहरू
सर्तहरू अफ्रिन बनाम फ्लोनेज द्वारा उपचार गरिएको
अफ्रिनलाई नाकको भीडको उपचारको लागि संकेत गरिएको छ। यो नाक प्रक्रियाहरूमा vasoconstriction प्रेरित गर्न अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ। अफ्रिनको ईन्फ्लेमेन्टरी वा एलर्जिक मध्यस्थहरूमा कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव हुँदैन, जसले साइनस भीडको निम्त्याउन सक्छ।
फ्लोनेज एक पर्चा एलर्जी र nonallergic (बारमाही) राइनाइटिस को उपचार को लागी संकेत गरीन्छ। ओभर-द-काउन्टर उत्पादन घाँटी ज्वरो वा एलर्जीको राइनाइटिस सम्बन्धी माथिल्लो श्वसन एलर्जी लक्षणहरूको उपचारको लागि लेबल गरिएको छ। यी लक्षणहरूले भरिएका नाक, छींक, नाक, खुजली नाक, र खुजली, आँखाहरू आँखा समावेश छन्। यो एक मात्र ओभर-द-काउन्टर नाक स्प्रे हो जसले यी सबै लक्षणहरूको लागि संकेत दिन्छ।
सर्त अफ्रिन फ्लोनेज
साइनस भीड हो हो
नाक प्रक्रियाहरू को लागी Vasoconstriction अफ-लेबल हैन
एलर्जी राइनाइटिस हैन हो
Nonallergic राइनाइटिस हैन हो
माथिल्लो श्वसन एलर्जी लक्षण हैन हो
के अफ्रिन वा फ्लोनेस अधिक प्रभावकारी छ?
अफ्रिनको कार्य सुरूवात १० मिनेट हो, जसले बिरामीहरूलाई नाकका लक्षणहरूको द्रुत राहत प्रदान गर्दछ। दुर्भाग्यवस, यो केवल छोटो अवधि प्रयोगको लागि सिफारिश गरिएको छ: तीन दिन वा कम। फ्लोनेजको पूर्ण प्रभाव एक हप्ता वा सो भन्दा लामो समयसम्म महसुस हुन सक्दैन, तर यो लामो अवधिमा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ। फ्लोनाज नाकाको भीड भन्दा बढी उपचार गर्न पनि संकेत गरीन्छ। यसले एलर्जीको प्रतिक्रियाको बहु लक्षणहरूलाई कम गर्दछ, बहेको नाक, छींक र आखाँको आँखा सहित। अफ्रिनले यी एलर्जी प्रतिक्रिया कारकहरूमा कुनै प्रभाव पार्दैन।
एउटा अध्ययनले समवर्ती उपयोगको बारेमा हेर्यो oxymetazoline र fluticasone यदि ती भीड को प्रत्येक को प्रतिक्रिया को बढ़ाने को लागी निर्धारित गर्न को लागी। यसले तीन उपचार समूहहरू तुलना गर्दछ: प्लेसबो, अक्सिमेटाजोलिन एक्लो, र फ्लोटिकासोनलाई अक्सीमेटाजोलिनको साथ। यस अध्ययनमा, oxymetazoline तीन दिनको सिफारिश अवधि भन्दा लामो लागि प्रयोग गरिएको थियो। दुबै अक्सिमेटाजोलिन र फ्लुटिकासोन प्रयोग गरेर नाकको हावा मात्रा ठूलो थियो। यो पनि ध्यान दिइयो कि रिबाउन्ड भीड उपस्थित थिएन, सुझाव दिए कि अक्सीमेटाजोलिनको साथ एक्लो प्रभावको थप अध्ययन गर्न सकिन्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले कुन उत्पादन (हरू) तपाईको लागि उत्तम हो भन्ने निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
कभरेज र अफ्रिन बनाम फ्लोनाजको लागत तुलना
अफ्रिन सामान्यतया बीमाले ढाक्दैन किनकि यो प्रिस्क्रिप्सन उत्पाद होईन। यो दुबै मेडिकेयर र व्यावसायिक योजनाहरूको लागि सही हो। एक १ m मिलीलीटर बोतलको खुद्रा लागत लगभग $ ११ जति सम्म हुन सक्छ। तपाईंको डाक्टरले अफ्रिनको लागि प्रिस्क्रिप्शन जारी गर्न सक्दछ, र एकलकेयर कूपनको साथ, तपाईंले जेनेरिक संस्करण as .1.११ भन्दा कममा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
फ्लोनेज, वा यसको जेनेरिक, सामान्यतया वाणिज्यिक र मेडिकेयर औषधि योजनाहरूले ढाक्छ। १२० स्प्रे राखिएको बोतलमा फ्लोनाजको खुद्रा मूल्य २$ डलरसम्म हुन सक्छ तर कुपनको साथ, बिरामीहरूले प्रिस्क्रिप्शनको साथ $ ११- $ १२ जति कम तिर्न सक्छ।
मानक खुराक १ m मि.ली. बोतल १ g ग्राम बोतल
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे n /aफरक, तर सामान्यतया $ १० भन्दा कम
एकलकेयर लागत $ $ $ १$ $ ११- $ २
अफ्रिन बनाम फ्लोनाजको साझा साइड इफेक्टहरू
अफ्रिनलाई नाक म्यूकोसामा अस्थायी, स्थानीय जलनको रूपमा चिनिन्छ, र यसले छींक लाग्न सक्छ। यो प्रशासनको केहि मिनेटमा पार गर्नु पर्छ। यदि अफ्रिन तीन दिन भन्दा बढीको लागि प्रयोग गरियो भने, बिरामीहरूले पल्टाइएको भीडको अनुभव गर्न सक्दछन्। यस घटनालाई राइनाइटिस मेडिसमेन्टोसा पनि भनिन्छ, जब अफ्रिनले प्रेरित भसोकनस्ट्रिक्टले स्थानीय टिशूहरूमा रगतको आपूर्ति बन्द गर्‍यो। यसले सुन्नि र ईन्फ्लेमेसन निम्त्याउँछ रिवाउन्ड भीडको अनुभूतिले अफ्रिनले उपचार गरेको मूल भीडभन्दा पनि खराब महसुस गर्यो।
फ्लोनेससँग तुलनात्मक रूपमा उच्च टाउकोको दुखाइको साथ धेरै सँगसँगै छ बिरामीहरूको १%% Flonase प्रशासन पछि टाउको दुख्दै। अर्को धेरै सामान्य साइड इफेक्ट नाक रगत वा एपिस्ट्याक्सिस हो।
दुबै अफ्रिन र फ्लोनेजले नाक म्यूकोसाको स्थानीय जलन पैदा गर्न सक्छ।
निम्न चार्ट सबै सम्भावित साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूची हुने उद्देश्यले गरिएको छैन। सबै सम्भावित साइड इफेक्टहरूको सूचीको लागि कृपया तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिष्टबाट परामर्श लिनुहोस्।
टाउको दुखाई हैन n /aहो %% -१%%
चक्कर हैन n /aहो १% -3%
मतली / बान्ता हैन n /aहो %% -5%
स्थानीय जलन हो परिभाषित छैन हो %% -6%
Intraocular दबाव बढेको हैन n /aहो १% -3%
एपिस्ट्याक्सिस हैन n /aहो %% -१२%
नाक म्यूकोसल अल्सर हैन n /aहो %% -8%
नासोफ्यारेन्जाइटिस हैन n /aहो %%
तीव्र साइनसाइटिस हैन n /aहो %%
नाक म्यूकोसामा रगत हैन n /aहो १% -3%
सुख्खा नाक हो परिभाषित छैन हो १% -3%
पुनः नाका नाच हो परिभाषित छैन हैन n / a
दुखेको घाँटी हैन n /aहो १% -3%
स्रोत: अफ्रिन ( डेलीमेड ) फ्लोनेज ( डेलीमेड )।
के छिटो घाँटी दुख्छ?
अफ्रिन र फ्लोनेजको ड्रग अन्तर्क्रिया
यद्यपि दुबै अफ्रिन र फ्लोनेजको स्थानीय प्रभाव छ जहाँ उनीहरू नाकमा माथिबाट लागू हुन्छन्, त्यहाँ केहि अन्य औषधिहरू छन् जुन उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्।
एर्गोट डेरिभेटिभ्स औषधीहरूको वर्ग हो जुन माइग्रेनको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। Migranal एक अनुनासिक स्प्रे एर्गट डेरिवेटिव हो जुन चिह्नित vasoconstriction कारणले काम गर्दछ। अफ्रिनको एकसाथ प्रयोग, जसले पनि भासकोण्टस्ट्रक्शनको कारण गर्दछ, अत्यधिक मात्रामा भासकोण्टस्ट्रक्शनको परिणाम दिन्छ। यस संयोजनलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ।
Esketamine एक antidepressant नाक उत्पादन हो जुन साताको एक वा दुई चोटि प्रशासित हुन्छ। दुबै अफ्रिन र फ्लोनेजले एस्केटामाइनको प्रभावहरू घटाउन सक्छ। यदि एस्केटामाइन डोज गर्ने दिनमा अनुनासिक डिकन्जेन्टेन्ट आवश्यक छ भने, नाक नाघ्ने औषधी एस्केटामाइन भन्दा कम्तिमा एक घण्टा अघि प्रशासित गर्नुपर्दछ।
निम्नलिखित तालिका सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची हुने उद्देश्य राख्दैन। पूर्ण सूचीको लागि कृपया तपाईंको चिकित्सा पेशेवरलाई सल्लाह लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास अफ्रिन फ्लोनेज
Atomoxetine Norepinephrine reuptake अवरोधकर्ता हो हैन
भांग क्यानाबिनोइड्स हो हैन
डेस्मोप्रेसिन वासोप्रेसिन एनालग हैन हो
एर्गोटामाइन एर्गट डेरिवेटिवहरू हो हैन
एस्केप NMDA रिसेप्टर विरोधी हो हो
Fentanyl (नाक सीरम) ओपिओइड हो हैन
टेडीजोलिड एन्टिबायोटिक हो हैन
डोक्सेपिन Tricyclic antidepressants हो हैन
अफ्रिन बनाम फ्लोनाजको चेतावनी
अफ्रिन केवल तीन दिन भन्दा बढीको लागि प्रत्येक १२ घण्टाको खुराक वृद्धिमा प्रयोगको लागि मात्र हो। सिफारिस गरिएको भन्दा बढि समयका लागि यस उत्पादनको प्रयोगले अत्यधिक रिवाउन्ड भीडको परिणाम दिन सक्छ। अफ्रिनले अस्थायी असुविधा निम्त्याउन सक्छ जस्तै चुरो, खुजली, वा नाकको बाटोमा जलेको।
फ्लोनेज नाक प्रक्रिया वा शल्य चिकित्सा पछि उपचार ढिलो गर्न सक्छ र तपाइँको डाक्टर द्वारा अनुमोदित सम्म प्रयोग हुन सक्दैन। यदि तपाई प्रणालीगत स्टेरोइड वा इम्युनोसप्रेसन्ट ड्रग्स, जस्तै एचआईभी ड्रग्स लिनुहुन्छ, फ्लोनेज प्रयोग गर्नु अघि तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नुहोस्। चुरोट वा छीँकी प्रशासन पछि तुरून्त हुन सक्छ। यदि तपाइँका लक्षणहरू सात दिन पछि फ्लोनेजको प्रयोगको सुधार भएन भने तपाइँको चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
नाक स्प्रे कन्टेनरहरू एकल व्यक्ति द्वारा प्रयोगको उद्देश्य हो। नाक स्प्रे कन्टेनर साझेदारी गर्दा संक्रमण हुन सक्छ। आँखा वा मुखमा स्नाक स्प्रेहरू स्प्रे गर्नु हुँदैन।
अफ्रिन बनाम फ्लोनाजको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
अफ्रिन के हो?
अफ्रिन एक ओभर-द-काउन्टर नाक स्प्रे डेकोन्जेन्टन्ट हो। यसले oxymetazoline समावेश गर्दछ, जुन अल्फा-एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हो जसले स्थानीय vasoconstriction निम्त्याउँछ। अफ्रिन द्रुत-अभिनय हो, तर लगातार तीन दिन भन्दा बढि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
फ्लोनेज एक कोर्टिकोस्टेरोइड नाक स्प्रे हो जुन दुबै प्रिस्क्रिप्सन र अति-काउन्टरको रूपमा उपलब्ध छ। यसले सक्रिय संघटक फ्लोटीकासोन समावेश गर्दछ, जसले नाकको मार्गमा भड़काउने मध्यस्थहरूको उत्पादन घटाउँछ। Flonase धेरै दिन वा हप्ता पछि यसको पूर्ण प्रभाव पुग्छ र लामो अवधि को उपयोग गर्न सुरक्षित छ।
के अफ्रिन र फ्लोनेस एकै छ?
जबकि दुबै अफ्रिन र फ्लोनेज दुबै नाकको स्प्रे हुन् जसले नाकको भीडको लक्षणहरूलाई कम गर्दछन्, ती समान छैनन्। अफ्रिन एक स्थानीय भासकोन्स्ट्रिकटर हो जसले नाकको बाटोमा तरल पदार्थ घुसपैठ सीमित गर्दछ। फ्लोनेज एक स्टेरोइड हो कि एलर्जी प्रतिक्रिया द्वारा ल्याइएको भड़काऊ प्रतिक्रिया मध्यस्थता गर्दछ।
अफ्रिन वा फ्लोनेस राम्रो छ?
अफ्रिन १० मिनेट भित्र कार्यको सुरूवातको साथ भीडलाई द्रुत प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ। तथापि, तीन दिन भन्दा बढि प्रयोगको लागि सिफारिश गरिदैन। भीडको लक्षणलाई कम गर्न फ्लोनस सुस्त छ तर सुरक्षित रूपमा लामो अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। फ्लोनेज अन्य एलर्जी लक्षणहरू जस्तै बकबक नाक, छींकने, र आँखामा चिलाउने बिरूद्ध प्रभावकारी हुन्छ।
के म गर्भवती हुँदा अफ्रिन वा फ्लोनेज प्रयोग गर्न सक्छु?
गर्भावस्थाको पहिलो तिमाहीमा अफ्रिन प्रयोगसँग प्रतिकूल भ्रुण घटनाहरू सम्बन्धित छन्। यद्यपि गर्भावस्थामा ढिलो एक पटक प्रयोग हानिकारक देखाइएको छैन, अफ्रिन गर्भावस्था मा एक अनुनासिक नाक डिजेन्जेन्ट छैन। Flonase गर्भावस्थाको समयमा प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन सक्छ, जबकि अन्य डिकन्जेस्टन्ट वा स्टेरोइड स्प्रे अधिक सुरक्षा डाटा उपलब्ध हुन सक्छ। मनपरेको नाक ड्याजेन्जेन्ट छनोटको लागि तपाईंको चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
के म मदिराको साथ अफ्रिन वा फ्लोनेज प्रयोग गर्न सक्छु?
मदिरा सेवन गर्ने बिरामीहरूलाई अफ्रिन र फ्लोनास सुरक्षित रूपमा चलाउन सकिन्छ।
के अफ्रिन स्टेरोइड नाक स्प्रे हो?
अफ्रिन स्टेरोइड होइन। यो अल्फा-एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हो जसले नाकको परिच्छेदमा भासकोण्ट्रिकसनलाई प्रेरित गरेर काम गर्दछ।
के फोलोनस एन्टिहिस्टामाइन वा डिकन्जेस्टन्ट हो?
फ्लोनेज एन्टिहिस्टामाइन वा सीधा डिकन्जेस्टन्ट होइन। यसले नाकको भीडको लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मैले कहिले बिहान वा रात फ्लोनेस लिनु पर्छ?
फ्लोनेज दुई मध्ये एक तरीकाले dosed हुन सक्छ। या त बिरामीले बिहान र / वा साँझमा प्रत्येक नाकमा एक स्प्रे प्रशासन गर्न सक्दछ (२ 24 घण्टाको अवधिमा चार कुल स्प्रेहरू), वा बिरामीहरूले प्रत्येक नाकमा एकै समय, बिहान वा साँझ दुई स्प्रे स्प्रे गर्न सक्छन्।
Afrin नाक स्प्रे को दीर्घकालीन उपयोग
तपाइँ कसरी फ्लू बाट छुटकारा पाउनुहुन्छ?
टिभी १००३ सेतो पट्टी ५५५ सडक मूल्य
भियाग्रा जब सबै भन्दा राम्रो परिणाम को लागी यो लिन को लागी